Kooxo Burcad Ah Oo Dilay Xasan Dheere. – Calamada.com
Kooxo Burcad Ah Oo Dilay Xasan Dheere.
calamada December 30, 2018 1 min read
Saacadihii lasoo dhaafay waxey Kooxo Burcad Konfur Afrikan ah qeybo ka mid ah dalkaasi ku dileen qof Somali ah oo ka mid ahaa dadka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalkaasi.
Kooxaha Burcad Konfur Africanta ah ayaa goobtiisa ganacsi oo ku taala magaalada Cape Town ku dilay Xasan Dheere oo ka mid ahaa Soomalida ku ganacsata magaaladaasi.
Dilka kooxaha Burcadda Konfur Afrikanta ah ay u geysteen Xasan Dheere ayaa qeyb ka ah dilalka joogtada ah ee ay u geystaan dadka Soomaalida ah kuwaasi oo sidoo kalane ay boobaan goobahooda ganacsi,waxaana xusid mudan in sidoo kale dhawaan kooxaha Burcad Konfur Afrikanta ah isla gudaha magaalada Cape Town ay ku dileen Axmed Shire Nuur oo ka mid ah dadka Somalida ah ee ku dhaqan dalkaasi.
Dalka Konfur Afrika oo kaliya ma ahan dalalka Caalamka ee sida joogtada ah loogu dila dadka Soomaalida ah,iyadoona Todobaadkii lasoo dhaafay gudaha magaalada caasimadda u ah dalka Bangladesh lagu dilay Ruux Somali ah kaasi oo ay dileen Burcad Tooreeyo ku hubeysnaay.
Sidoo kale Kanada,Mareykanka iyo dalal kale oo badan ayaa si joogta ah loogu dilaa dadka Somalida ah,iyadoona Kufaarta iyo Murtadiinta ay ka wada go’antahay in meel walbo ay ku dilaan dadka Muslimiinta ah.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm-23-04-1440 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka 24-04-1440 Hijri.